कांग्रेस सिद्धिने कि सुध्रिने ? – Online National Network
२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०३:१७
काठमाडौं, २३ कात्तिक – सधैं र सबै परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने, हरेक परिवर्तनलाई आफ्नो दरिलो काँध, बलियो पाखुरी, बौद्धिक भर अनि जीवन बलिदान दिने नेपाली कांग्रेस यतिबेला भयानक आपद-विपदको मनस्थितिमा चुनावको सामना गर्दैछ । चुनावको भय, आतंक र त्राशको स्थितिमा यतिखेर जति कहिल्यै परेको थिएन कांग्रेस । देशमा बामपन्थी जनमतको बाहुल्यता प्रायः सधैं छ रहेको देखिन्छ । वि.स. २०१५ को चुनाव पछि कांग्रेसको जनमत क्रमशः खस्केको छ । बामपन्थीहरुको जनमत बलियो तर शासन सत्तामा पकड़ फितलो छ । नेपाली भुमीमा बामपन्थी आकर्षण खुवै मौलाएको छ ।
अधिनायकवादी व्यवस्थाको लागि नेपाली जनमत तयार छ । जनताको चाह के हो भने सधै अस्थिर सरकार र आलोपालोको सरकार भन्दा जोसुकैले जिते पनि कम्तिमा स्थिर सरकार हुनुपर्यो र पाँच वर्ष एउटामात्र सरकारले काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हो । यसमा विश्लेषण खै ? के यति सजिलै साम्यबाद आउछ ? जनअनुमोदन द्वारा कम्युनिस्ट शासन सत्तामा आउँछन चुनावलाई उपयोग गर्छन आवधिक निर्वाचन प्रणाली बाट छनोटमा रहेर जुनसुकै बाद आए पनि ग्राह्य र स्वीकार्य हुन्छ मान्नु पर्छ ।
प्रजातन्त्रमा जनताको मत लिएर जो सुकै जितेर आउन सक्छन र आउन दिनु पनि पर्छ । जनमतको कदर भन्ने तर जनताले चाहेको विषयमा भोटिङ गर्न नमान्ने पनि प्रजातन्त्र हुन्छ ? अहिले पनि दलीय सिण्डिकेट र तानाशाही ब्यबस्था विद्यमान छ यदि होइन भने राजसंस्था, हिन्दु धर्म र संघीयताको बारेमा जनमत बुझ्न किन कांग्रेस पार्टीको खुट्टा काम्छ ? अत्याधिक जनमत भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन गलाको पासो बन्छ यो मुद्दा र विषय ।
चुनाव हार्न सकिन्छ तर चुनाव हारेर भाग्नु चैं हुँदैन । चुनाब हार्नु भनेको आफ्नो कमजोरी सच्याउने, अरुलाई सच्चिन मौका दिने र जनतासँगको दुरी नजिक बनाउने माध्यम पनि हो । इमान, नैतिकता, निष्ठा समर्पण र आदर्श मुल्य र मान्यता अनि दृष्टिकोण हार्नु हुँदैन । जनमत तलमाथि हुँदा कहिलेकाहीँ सहने धैर्यता राख्नु पर्छ । तर कांग्रेसको त्राश र मनोवैज्ञानिक पक्ष नियाल्दा लाग्छ कांग्रेस यो चुनावमा कहिल्यै कसैगरी नउठ्ने गरी लड्दैछ ।
परिवर्तनको अपरीहार्य नेतृत्व र सबैको अबिभाकीय र स्वीकार्य भूमिका २००७ देखि आजसम्म करिबन ७० बर्ष अविछिन्न बोकेको कांग्रेस किन चुक्दै छ ? इतिहासको त्यो गौरबशाली बिरासत किन आज धरमर भयो ? कहिल्यै र कुनै दिन गम्भीर भएर समिक्षा गर्यौ कांग्रेसजन ? दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको बामपन्थीहरुको क्रेजलाई कुनै नौलो आकर्षण र कार्यक्रमले प्रतिकार गर्यौ ? कुनै रचनात्मक र दीर्घकालीन महत्वको बिषय वस्तुलाई उठान गरेर अरु भन्दा पृथक आफ्नो पहिचान देखाउन सक्यौ कांग्रेसजन ?
तपाईहरुले आफ्नो कार्यकालमा यो आफ्नो यो अर्काको नभनी गल्तीलाई निरुत्साहित गर्न दण्ड र सहि र राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्न निष्पक्षताको नीति र गति अवलम्बन गर्नुभयो ? समाजमा सत्ता संचालनको कुनै मानक संस्कृति स्थापित गर्ने पहल गर्नुभयो ? यत्रो वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्दा कहिं न कहिं कतै न कतै राम्रो काम पनि गरेका थियौ होला त्यो कामको प्रचार गर्न के ले बाधा गर्‍यो ? किन आफूले गरेका आफ्नो पालामा भएका राम्रा कामको फेहरिस्त पस्कन सक्दैनौ ?
यतिका वर्षमा यो झ्याल्टुंग संबिधान मात्र हाम्रो कार्यकालको उपलब्धि भन्दा झन्डै शरम मान्नुपर्ने हो ? वर्षौं सत्ता आरोहणको लागि मर्न तयार हुने कार्यकर्ताको रेखदेख तपार्इको सत्ताले कति गर्‍यो ? जनतामा धन्यवाद दिन कुनै अतिआवश्यक अवसर कहिल्यै समानुपातिक वितरणबाट जनताको घर–दैलो सम्म पुर्‍याउनु भयो ? मान्नुस कांग्रेसजन धन्न जनता तपाईहरुलाई आज सम्म भोट हाल्दैछन् ।
धैर्य ,धीरता र धर्म गुमाएर होला कांग्रेस गठबन्धनको नाममा जो सुकै र जतासुकै लतारिन र घस्रिन पुग्नु देशको सबभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीको दूरदर्शी र नीति र कार्यक्रम भएन । सत्ताबिना ‘पानी बिनाको माछो जस्तै हुनु’ सकिन आट्नुको संकेत हो । नेतृत्वमा विषम परिस्थितिलाई कुशल ढंगले सामना गर्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ खै त्यस्तो ल्याकत ? बाम गठबन्धन र उसले पाएको स्थानीय निकायको मतलाई मात्र आधार मान्ने हो भने बामहरू झन्डै दुई तिहाइको नजिक छन् ।
यहि आकडा र तथ्य हेरेर मात्र आतिनु राजनेताको लक्षण होइन र हुन् सक्तैन । कांग्रेसमा राजनेताको खडेरी पर्न अब शुरु भयो या अरु कांग्रेसको बुढो गलेको पुस्ताको काध फेर्ने युवा छन् । तर अवसरको अभावमा या उचित समायोचित मौकाको खोजीमा अब देखिन्छ पक्कै पनि । अब कांग्रेस सुध्रेन भने सकिनु , नासिनु र मासिनुको विकल्प छैन। त्यसैले कांग्रेस सुध्रिनु पर्छ । कांग्रेस सुध्रियो भने अरु सुध्रिन सक्छन । अरु सुध्रिए भने कांग्रेसलाई नसुध्रि धरै छैन या सुध्रीएन् भने भविष्य छैन । सिद्धिनु र सकिनु भन्दा उत्तम विकल्प सुध्रिनु र भुल सच्याउनु हो । त्रुटीलाई कम गर्नु हो । गलत बाटो हिडेको छ गलत नीति बोकेको छ भने त्यसलाई ठिक बाटोमा र समयानुकुल बनाउनु कांग्रेसको बृहत हित र देश हितको मार्ग हो ।
समयको आवाज र पदचापलाई कांग्रेसले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र सुहाउदैन । अब बृहत देश र पार्टी हितको लागि नविन पुस्ता नविन सोच शैलीलाई कांग्रेसले आत्मसाथ गरेर अघि जानुपर्छ । थाकेका र भिजनहिनहरुबाट पार्टीको बागडोर नयाँ र आशालाग्दो पुस्ताको काधमा राखिदिनु पर्छ । कांग्रेस परम्परागत पुस्ता वंशकुल भन्दा बाहिर पनि २१ औं शताब्दीको पुस्ताले पनि मेरो र हाम्रो पार्टी भन्ने अनि त्यहाँ भित्र आफ्नो र देशको भविष्य सुनौलो देख्ने अवधारणा र कार्यक्रर्मको विकास गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसले हिजोदेखि पालेको यो भ्रम र सपना भुल्नु पर्छ कि’ हामी नभए देश हुँदैन लोकतन्त्र रहँदैन ‘ । हो कांग्रेस बिग्रेको कारण देशलाई समस्या भएको छ देशलाई हानी नोक्सानी भएको छ कांग्रेसको असफलता सँगै देशलाई संकट परेको छ तर त्यो दिन र अवस्था अब छैन र रहन्न पनि ।
बलियो आत्मविश्वास र गहिरो समीक्षाका साथ् कांग्रेस चुनावमा गए अझै शर्मानक हार खप्नु पर्दैन । भ्रष्टाचार निवारणको लागि आफू र आफ्नो वरीपरीबाट सफाई अभियान शुरु गर्नुस । नाताबाद, कृपावाद, चाप्लुसी र चाकरीलाई अहिल्यै देखि ठाउँ नदिनुस् । सक्षम, इमान, निष्ठा र विवेकलाई खोजीखोजी पुरस्कृत गर्नुस । पार्टीले नयाँ जीवन पाउनेछ ।
पारदर्शिता, इमान्दारिता र नैतिकतालाई नृत्यकर्म र सुत्र बनाउने पहल गर्नुस । इतिहासको ब्याज होइन बर्तमानको चुनौती सामना गर्ने क्षमतावानहरुको साथ् लिनोस कांग्रेस डायनोसर हुन्बाट बच्ने छ । कांग्रेस सुध्रिने या सिद्धिने आगामी कांग्रेसको कार्यब्यापारले निर्धारण गर्नेछ । कांग्रेस आफ्नै अनैतिकता, अक्षमता, अहम, अल्छेपन, अपारदर्शिता र अकर्मण्यताले सकिन्छ अरु जुनसुकै अधिनायकवादी चुच्चे रेलमा चढेर आए पनि अहिले सकिदैन । आफ्नो अवमूल्यन नगर कांग्रेसजन ।
-संजिव कार्की imageonline